Ahoana ny fijanonana amin'ny famoahana ny tenanao: toro-hevitra 7 mahomby be - An-Tsaina
Ahoana ny fijanonana amin'ny famoahana ny tenanao: toro-hevitra 7 mahomby be
Matetika isika no mpitsikera ratsy antsika manokana, indrindra rehefa miatrika olana ara-pahasalamana na raha tsy manana fifandraisana tsara amin'ny tenantsika isika.
Ny hany ilaina dia ny hadisoana tsy manan-tsiny iray, lesoka kely iray hanalana hevi-dratsy miorina amin'ny famotehana ny tenanao.
Na mety tsy hadisoana izany. Mety ho zava-bita noforoninao tamim-pitandremana sy niasanao izany mba tsy hahatratra ny tanjonao. Angamba tsy nankato ny antenainao fotsiny ianao.
Fa ny fikapohan-tena noho ny lesoka sy ny zava-bita ambany dia tsy hanakana azy ireo. Tsy hanao na inona na inona ho anao afa-tsy ny mampalahelo anao kokoa izany.
Manao fahadisoana ny rehetra. Ary indraindray, ny drafitra napetrakay tsara indrindra dia tsy mahatratra ny zavatra nantenaintsika ho azy ireo. Tsy zavatra ratsy ireo. Ampahany amin'ny fiainana fotsiny izy ireo.
Midika ve izany fa tsy tokony hiraharaha ny fitsiriritana na ny tsy fitandremana ianao? Tsia mihitsy. Fa misy tsy itovizan'ny fanakianana ny tena sy ny fanararaotana ny tena. Ilaina ny fitsikerana ho an'ny fitomboana sy ny fanatsarana ny tena. Ny fampijaliana tena dia miteraka fampijaliana tsy ilaina.
Izany karazana fisainana izany dia matetika manomboka amin'ny fahazazanao miaraka amin'ireo olon-dehibe tsy tsara fanahy. Ny fahazazana dia sehatra iray mamolavola izay ny fitsikerana mahery setra na fanararaotana amin'ny fotoana mampahalemy dia mety handratra izay mitohy hatramin'ny fahamatorana.
Ny fahavoazana dia manamora ny fieritreretana fa ilay olona dia tokony hisoroka ny fitsikerana olona hafa ary ho tonga lafatra ho tiavina, mendrika ary mendrika. Ary rehefa tsy azo ihodivirana izy ireo fa tsy tonga lafatra, satria tsy misy olona, ​​dia nokapohin'izy ireo ny tenany ho sazy noho ny tsy fahombiazany.
Olana tokony halamina izany satria misy ny fifandraisana misy eo amin'ny resaka tena ratsy loatra sy ny tsy fanatratrarana tanjona . Ireo olona manana resaka ratsy amin'ny fomba henjana na henjana dia matetika mihinana risika vitsy kokoa ary tsy mahafeno ny tanjon'ny maro.
izay maty notafihin'ny titan vanim-potoana 4
Ny olona tsara fanahy kokoa amin'ny tenany sy mangoraka kokoa ny lesoka dia mahatratra ny tanjony matetika satria manangana tena izy ireo fa tsy manapotika tena.
Soa ihany, ny fanelingelenana ireo lamina eritreritra ireo dia zavatra azonao atao amin'ny fampiharana sy faharetana be dia be.
Ahoana no hampijanonanao ny daroka ataonao?
1. Fantaro ny antony nahatonga ny firesahana samirery momba ny tena.
Ny firesahana samirery amin'ny fomba ratsy dia matetika ateraky ny tranga sasany. Mety hahita izany fa tsy mandeha ny tanjona, manao fahadisoana, na zavatra sendra sendra ka niteraka valiny ara-pientanam-po.
tsy mifanaraka izahay mivady
Ohatra, ndao lazaina fa mandatsaka sombin-kafe tsy nahy ianao.
Amin'ny alàlan'ny reflex, ireo izay mikapoka ny tenany dia avy hatrany handrehitra fizotran'ny eritreritra momba ilay hetsika. Mety ho zavatra toy ny hoe: 'Tsy afaka manao zavatra mety aho.' “Fa maninona aho no tena tsy misy ilana azy?” 'Inona no tsy mety amiko?'
Ny famaritana ny trondro dia ahafahanao manapaka ny fizotran'ny eritreritra. Hiezaka ny hitsambikina avy hatrany ao an-tsainao ireo sainao ireo, fa ny tena tianao hatao dia ny fiatoana kely.
Eo ny fiatoana hanandramana manaisotra ny fihetsiky ny fihetseham-ponao amin'ny hetsika. Miezaha tsy mieritreritra na inona na inona raha hainao.
Mety hanampy anao ny miala amin'ny toe-javatra mandritra ny roa minitra raha azo atao. Ao amin'ny ohatra asehontsika, mandehandeha fotsiny ny mug kafe, mankanesa any amin'ny efitrano hafa, mijery eo am-baravarankely eo amin'izao tontolo izao izay mbola mihodina.
Raha tsy vitanao esory ny sainao amin'io zavatra io izany no manosika anao, miezaha tsy hanadino ny valiny ara-pientanam-po amin'ny fanoloana ny resaka diso momba ny tena amin'ny fomba tsara.
3. Soloina ny firesaka tena ratsy amin'ny resaka tsara sy mahitsy kokoa.
Ny fihetseham-po ratsy dia mila ampifanarahana amin'ny zava-misy. Ny olona iray dia tsy adala amin'ny famakiana tampoka kafe. Loza no mitranga! Mihidina ny mugs kafe! Tsy olana lehibe izany satria kapoaka kafe fotsiny.
Ireo no karazana eritreritra tianao hotratrarina sy hamboly.
Tsy mila mieritreritra zavatra diso momba azy ianao. Raha tsy nisy tanjona kendrenao satria tsy nety, tsy tena anao izany. Tsy zavatra tsara ihany koa anefa. Zavatra niseho izay tsy maintsy atrehinao izao.
Ny fiheverana diso dia mety manimba satria sarotra inoana kokoa, ka manasarotra ny fidiran'izany ary lasa fahazarana.
4. Ampahatanjaho amin'ny hatsaram-panahy tsy miovaova amin'ny tenanao ireo eritreritra tsara ireo.
Tsy ny sombin'io resaka diso momba ny tena io dia avy amin'ny toe-javatra mampihetsi-po avy hatrany. Indraindray, dia avy amin'ny fomba ifandraisanao amin'ny ankapobeny sy ny fiheveranao ny tenanao.
Eritrereto hoe manana eritreritra ratsy ianao momba anao. Amin'izay dia mora kokoa ny miditra amin'ny fahazarana mikapoka ny tenanao satria mety hahatsapa ianao fa toa tsy ampy fahaizana mendrika kokoa.
Mitadiava eritreritra, lamina ary fomba fijery ratsy momba ny tenanao izay iainanao amin'ny ankapobeny. Mety hisy fitaomana sy fanovana ve ireo? Inona no azonao soloina ireo zavatra ratsy ireo amin'ny zava-misy sy tsara fanahy kokoa aminao?
5. Avereno jerena ny lesoka sy ny tsy fahombiazana.
Olona vitsivitsy sarobidy no mbola mahomby amin'ny andrana voalohany. Ny ankamaroan'ny olona rehetra dia manomboka amin'ny farany ambany ary mila manatanjaka ny tenany. Matetika izany dia misy lesoka sy tsy fahombiazana. Efa niresaka momba ny lesoka izahay, fa ny tsy fahombiazana dia lohahevitra iray hafa izay mila kitihina.
Tsy mety ny tsy mahomby. Sa mety? Ny tsy fahombiazana dia azo raisina ho fiafarana matanjaka sy voafaritra, na azo jerena ho toy ny fotoana ahafahana misintona sy mihetsika hatrany.
Anisan'ny tsy fahombiazana ny fianarana momba izay tsy mety amin'ny drafitrao, na inona izany na inona. Azonao atao ny mandray izany fahendrena miasa mafy izany, miverina amin'ny tabilao fanaovana sary ary mandroso fandaharam-pianarana vaovao mandroso raha tena tianao izany.
Ny fijerena ny tsy fahombiazana amin'izany fomba izany dia manamora kokoa ny miatrika rehefa tsy mandeha ny raharaha. Tsy zavatra tokony hatahorana na hanaintaina izany. Ny tsy fahombiazana dia miseho amin'ny rehetra ary ho mpitsidika tsy tapaka amin'ny lalanao mankany amin'ny fahombiazana. Ny herinao dia avy amin'ny safidinao amin'ny fampiasana izany tsy fahombiazana izany.
iza no barry gibb manambady
6. Mihomehy amin'ilay toe-javatra.
Ny hatsikana dia mety ho fanefitra lehibe amin'ny adin-tsaina sy alahelo. Fandinihana misaraka amin'ny hazo nanazava tamin'ny antsipirihany ny Psychology Today nampiseho fa mahatsikaiky be ny hatsikana rehefa ampiasaina tsara.
Inona no dikan'ny hoe 'marina'? Midika izany fa ny fahitana ny lafiny mahatsikaiky amin'ny toe-javatra iray ary na dia ny fihomehezana ny tenanao amin'ny fomba malefaka aza. Izy io dia fantatra amin'ny hoe vazivazy manatsara ny tena.
Andao hiverina ity sambo kafe nalatsaka ity - mety hiteny ianao na hieritreritra zavatra toy izao, 'Mariho ny tenanao, mividiana mug izay bounces amin'ny manaraka!' na, 'Tsy hanao an'io ho juggler sirkus mihitsy aho, fa clown kosa etsy ankilany…'
Ianao angamba miatrika ny fandavana tsy tapaka ho an'ny asa ampanaovinao. Raha tokony hifantoka amin'ny tsy fahaizanao miasa ianao, mihomehy ary miteny hoe, 'Fotoana bebe kokoa hanamafisana ny fahaizako amin'ny maha-mpitsikera amin'ny fahitalavitra anao.'
Na raha tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiarahanareo na inona na inona antony, dia mety hiteny ianao hoe: 'Be dia be ny trondro any an-dranomasina, na dia heveriko fa diso aza ny fampiasako umpan!'
tezitra daholo isika eto mad hatter
Fianarana hafa nampiseho fa ny olona mampiasa hatsikana tsy tapaka dia mazàna mandray anjara amin'ny famerenana tsara - izany fomba malina milaza fa mahita zavatra hafa izy ireo ary mitady ireo firavaka volafotsy. Izy io dia mifamatotra amin'ny teboka teo aloha momba ny famolavolana ny lesoka sy ny tsy fahombiazana.
Mialà amin'ny vazivazy mandresy tena, na izany aza, izay manapotika tena fotsiny nefa manandrana mampihomehy izany. Hahatonga anao hahatsapa ho ratsy kokoa amin'ny tenanao izany raha efa mahatsiaro ho ambany ianao.
7. Miasa am-paharetana amin'ny fanovana izany fifanakalozan-kevitra anaty izany.
Tsy ho mora ny fizotry ny fanovana ny dinika anatiny ataonao. Mety ho hitanao aza fa sarotra aminao ny hino ireo hafatra mangoraka kokoa omenao ny tenanao.
Elaela vao ho lasa fahazarana vaovao ahafahanao mahazo fampiononana ity. Izy io dia zavatra tokony hataonao fanazaran-tena tsy tapaka, misolelaka ary mikorontana ary avy eo manapa-kevitra ny hanandrana hatrany. Arakaraka ny anaovanao azy no mahamora azy.
Ity karazana fanitsiana ity dia manampy ny drafitra lehibe amin'ny zavatra, saingy tsy ny fanamboarana ireo olana ifotony izay nisarika ny sainao ho any amin'io lalana io. Ny olona manana fahazaza mahery setra na tafavoaka velona amin'ny herisetra an-tokantrano dia matetika no mila mpitsabo aretin-tsaina hanidy ireo ratra ireo ary avelao izy ireo ho sitrana. Aza misalasala mitady fanampiana matihanina raha sahirana ianao manova izany fifampiresahana anaty izany.
Mbola tsy azonao antoka hoe maninona ianao no mikapoka ny tenanao sa ahoana no hijanonanao? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana no hampijanonana ny fanomezan-tsiny ny tenanao amin'ny zava-drehetra: toro-hevitra mahomby 5!
Ahoana no hampijanonana ny fahatsapanao nenina ho anao: toro-hevitra 8 mahomby be
Ahoana no hampijanonana ny fahatsapanao ho meloka noho ny lesoka taloha sy ny zavatra tsy nety nataonao
Fomba 9 hanehoana hatsaram-panahy amin'ny tenanao - ny tena dikan'izany
Raha mahatsiaro tena ho dondrona ianao dia ireto misy 7 tsy misy antony tsy antony!
11 famantarana ny fisainana feno fankahalana tena (+ Ahoana no fomba handresena azy)
Ahoana ny fomba hialana amin'ny fahatsapana tsy fahombiazana: 12 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Inona no hatao raha mahatsapa ianao fa olona ratsy
Raha mahatsapa ho diso fanantenana ianao na amin'ny hafa, vakio ity
ahoana no hahalalana hoe rehefa mifankatia ianao
Mahatsiaro hitomany aho fa tsy afaka
shucky ducky quack quack mpamandrika t
afaka mitia olona tsy fantatrao ve ianao?
manao ahoana ny fiainanao amin'izao fotoana izao